“मैले बामदेव र बादलको साथ पाएँ भने देशको कायापलट गरिदिन्छु” पूरा पढनुहोस् – Onlines Time
December 23, 2020 onlinestimeLeaveaComment on “मैले बामदेव र बादलको साथ पाएँ भने देशको कायापलट गरिदिन्छु” पूरा पढनुहोस्
काठमाडौं, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ￼ बहादुर थापा बादल आफ्नो समूहको बैठकमा आउने बताएका छन्। ओली र प्रचण्ड दुबै समूहको बैठकमा नगएका बादल आफ्नो समूहको बैठकमा आउने उनको दाबी छ।“बादल भोलिको हाम्रो बैठकमा आउनु हुन्छ,” प्रचण्डले भने, “वामदेव गौतम पनि बालुवाटारको बैठकमा जानु भएको छैन। यतै आउनु हुन्छ।” उनले प्रचण्ड–नेपाल समूहको बैठक आधिकारिक भएको दाबी गरेका छन्।
यसअघि बादलले आफू निकट नेताहरुसँग आफ्नै निवासमा छलफल गरेका थिए।वादलका स्वकीय सचिव सूर्य सुवेदीले नेकपा फुटिसकेका कारण अब विचार मिल्नेहरुसँग नै आफूहरु रहने स्पष्ट गरेका छन्। सोमबार बिहान भएको भेलामा पनि वादलले आफू अन्तिममा प्रचण्ड र माधव नेपालकै समूहमा रहने स्पष्ट पारेका थिए।
नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा भएको भेलाबाट केन्द्रीय समिति विस्तार गर्ने निर्णय लिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले १ तिहाई केन्द्रीय सदस्य भएको बैठकले झण्डै २ तिहाई सदस्य संख्या थप्नु स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।￼
बालुवाटारमा बसेको ओली निकटको केन्द्रीय समिति बैठकले एकता महाधिवेशनका लागि भन्दै ११ सय ९९ जना सदस्य रहने केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको थियो।यसअघि रहेको ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीले २ वर्ष भित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अभिभारा पाएपनि काम गर्न नसककोले सदस्यको संख्या विस्तार ओली पक्षको तर्क छ। जसमा हाललाई १ हजार ३ सदस्सीय बनाइएको छ भने बाँकी संख्या क्रमशः थपिनेछ।तर प्रचण्डले आफूपक्षीय केन्द्रीय समिति बैठकमा ओलीले बोलाएको बैठक अवैधानिक रहेको जिकिर गरे।
उनले आफूहरुले बोलाएको बैठक नै वैधानिक रहेको समेत बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा बताए। ‘निर्वाचन आयोगलाई म भन्न चाहन्छु। यहाँ ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। केही सदस्य बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ। संविधान, नियम कानुन अनुसार यो वैधानिक नेकपा हो’, उनले भने ।संवैधानिक अंगहरु नेपालको ऐन कानुन अनुसार चल्छन् भन्ने विश्वासमा आफू रहेको पनि उनले बताए। प्रचण्डले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा बादल आफूहरुको समूहमा आउने पनि बताएका छन्।
ओलीले अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि भनेर प्रचण्डजीसँग सम्वाद गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, ‘मैले अस्ति प्रचण्डजीसँग भनेको थिएँ। हामीले केही मिलाउन सकेनौं, अब निर्वाचनले मिलाउँछ कि ? निर्वाचनमा त हामी एकजुट भएर जानुपर्‍यो । हाम्रो शक्ति एकजुट भएर निर्वाचनमा लगाउनुपर्‍यो । आपसी अन्तरविरोधहरु टुंग्याउनुपर्‍यो । अब एकजुट भएर हामी निर्वाचनको काममा अगाडि बढौं । प्रधानमन्त्री बन्नु नै छ भने पनि चुनावबाट बन्ने होला नि त ? प्रधानमन्त्री म चुनावबाट बनेको हुँ । यसले हामीलाई एक ठाउँ पुर्‍याउँछ । अरु पार्टीहरु पनि सकेसम्म एकजुट हुँदैछन् । चुनावका लागि, चुनावको सामना गर्नका लागि ।’
आफूमाथि भएका हमला स्मरण गर्दै ओलीले भने, तपाईंहरुलाई थाहा छ, ममाथि हमला कतिकति खेर हुन्छ ? मेरो आफ्नै जीवनमा, मेरो आफ्नै अनुभवमा भन्ने हो भने जब देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र थियो, पञ्चायती व्यवस्था थियो, अधिनायकवादी शासन थियो, त्यसबेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हामीले आन्दोलन शुरु गर्‍यौं । हमला भयो । मैले आफैं व्यक्तिगत तवरमा पनि झेल्नुपरेको छ भन्ने सुनाउनु छ ।’
ओलीको भनाइ थियो, ‘त्यसबेला हामीले आक्रमण सहनु पर्‍यो, मैले पनि जेलमा पनि बस्नुपर्‍यो । अरु साथीहरुले पनि बस्नुपर्‍यो । हामीमाथि हमला कतिबेला भयो भने जतिबेला हामीले जनताका लागि, देशका लागि एउटा निर्णाायक आन्दोलनको उद्घोष गरेर अगाडि बढ्यौं । त्यसबेला हमला भयो । त्यसपछिका दिनहरु पनि थुप्रै सम्झन्छु । तर, पछिल्लो समयको मात्रै कुरा गरौं ।’
ओलीले आफू नाकाबन्दीविरुद्ध डटेर सामना गर्दा पनि आफूमाथि हमला भएको प्रसंग निकाल्दै भने, ‘म प्रधानमन्त्री भएपछि नाकाबन्दीका विरुद्ध हामीले संविधान जारी गर्‍यौं । संविधान जारी गरेवापत हमला भयो । नाकाबन्दी हामीमाथि लगाइयो । नाकाबन्दीविरुद्ध हामीले डटेर सामना गर्‍यौं । त्यसबेला आलोचना र विरोध हामीविरुद्ध केन्दि्रत गरियो । देश बर्वाद भयो, नसक्ने ठाउँमा सिङ जुधाउन गयो । छिमेकीहरुसँग सम्बन्ध बिगार्‍यो। हामीले सम्बन्ध बिगारेको थिएन । हामीले त नाकाबन्दी भोगिरहेका थियौं र त्यसका विरुद्ध भोको पेटमा सामना गरिरहेका थियौं । तर, पनि हाम्रो राष्ट्रको सम्मान, सार्वभौम सत्ताका लागि लड्दा देशभित्रै आलोचना गर्ने व्यक्ति थिए । हाम्रै पार्टीका शीर्षनेताहरुले एउटा व्यक्तिको दुर्बुद्धिको कारणले, बोल्न नजानेर देश नै अप्ठ्यारोमा पर्ने स्थिति भयो, अब नेतृत्व फेर्नुपर्छ भनेर सार्वजनिक ढंगले बोलेर अभियान थाल्नुभयो ।’
उनको भनाइ थियो, ‘हामी एउटा देशबाट घेरिएका थियौं । चीनतिरबाट पनि बाटो खोलेपछि त सहिसक्नु नै भएन । तीव्र भयो, हमला । चीनतिरबाट पारवहन र यातायातसम्बन्धी सन्धी भएपछि, चीनतिरका विभिन्न नाकाहरु खोलेपछि, विभिन्न बाटाहरु बनाएपछि, चीनसँग जोड्ने बाटो बनाइयो भनेर हामीमाथि हमला भयो ।’
ओलीले एउटा सशक्त, एकतावद्ध र गतिशील पार्टी निर्माणको चरणमा आफूहरू रहेको बताउँदै भने, ‘म सुन्दैछु केपी ओलीलाई निकाल्नुहुन्छ रे । उहाँहरुले भन्दा १० वर्ष अगाडि पार्टी सदस्यता मैले लिएको होला । एउटा आन्दोलन सुरु गरेर जतिबेला आन्दोलन टुक्राटुक्रा, धुजाधुजामा थियो, त्यसअवस्थामा एकता एकीकरणको अभियान थालेर आएको मलाई आज ताजुब के भने प्रचण्डले मलाई निकालिदिने रे पार्टीबाट । म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी यस्ता कुराहरुमा अल्झिदैनौं ।’
‘प्रचण्डले पार्टीबाट निकाल्छन् कि, कहाँकहाँबाट निकाल्छन् कि, घरबाट पनि निकाल्छन् कि त्यो उनको कुरा हो । हामी एउटा आन्दोलनमा छौं, हामीले हाम्रा महान उद्देश्यहरु तोकेका छौं । हामी समाजवादमा पुग्न चाहन्छौं । त्यसकारण अहिले समाजवादउन्मुख छौं । समाजवाद उन्मुख भनेको लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाअनुसार काम गर्दै सामाजिक न्याय र समानता, सुशासनको बाटोमा अगाडि बढेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने । हामी यस उद्देश्यतर्फ अगाडि बढिरहेका छौं, ओलीले भने, ‘ पार्टी चल्न सक्ने अवस्थामा थिएन कमरेडहरु । हामीले चाहेर के गर्ने ? अहिले पनि चाहेका छौं । उहाँहरुले जस्तो कसैलाई निस्कासन गरेर कुदिरहेका छैनौं । उहाँहरु यति उपद्रो गर्दै हुनुहुन्छ, यति अन्तरघात गर्दै हुनुहुन्छ, वामपन्थी आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्न कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बिग्रहको खेती गरिरहनुभएको छ । तर, पनि हामी कसैलाई निकालिरहेका छैनौं । आफैं उहाँहरु किनारा लाग्दै हुनुहुन्छ । त्रिशुलीमा तपाईहरुले हेर्नुभएको होला, केही केही चिज नदीमा पर्‍यो भने त्यो बग्दै जाँदा किनारा किनारातिर लाग्छ । नदी बग्दै जाँदा फोहोरहरु किनारातिर धकेलिँदै जान्छ र सफा हुँदै अगाडि जान्छ ।
भन्न त नहुने हो, नमिले पनि जीवन शर्माको एउटा गीत सम्झिनुपर्‍योजस्तो लाग्छ, पिलो निचोरिँदैमा वजन घटेको हुन्न ।’ पिलो निचोरिन्छ, त्यसको खिल बाहिर जान्छ । वजन घटेको हुन्न ।
केपी ओलीलाई ठुलो थ्रे’ट आएको छ, दबाबमा परेर संसद बिघटन गरेका हुन
हे भग’वान यो के भयो, ८ महीने ब’च्चा बोकेर गोर्खा देखी रुदै सबीना आइन इन्द्रेनीमा (भिडियो हेर्नुहोस)
सबैले माया मा*रेर गाई दान गरेकी अनिता खड्का बोल्न थालिन, पैसाको लागि नाटक भन्नेलाई आयो जवाफ
February 11, 2021 February 14, 2021 onlinestime
अन्तत चितवन प्रहरी लाई ठुलाे सफल्ता,Sujita bhandari ह’त्या’ का’ण्ड सार्वजनिक,आफ्नै दाइ सगकाे सम्बन्ध ले… (भिडियो हेर्नुहोस्)
July 23, 2021 onlinestime
मृ*त्युसंग दिन रात ल*ड्दै बा*चेकी साहसी नर्सको मनै रु*वाउने कथा | रु*दै भन्छिन् मिल्ने भए आफनै सास दिन्थे (भिडियो हेर्नुहोस)
May 24, 2021 onlinestime